Bolgaria: Mpilalao Baolina Kitra Nidaroka Mpilatro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2018 4:51 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, македонски, English
Tafintohina tamin'ny vaovao momba ny mpilalao iray ao amin'ny klioba mpilalao baolina kitra ao amin'ny firenena, CSKA, nidaroka mpilatro ambony Kristin Vacheva i Bolgaria.
Nilalao tao amin'ny ekipa Slavia i Orlin Orlinov alohan'ny nidirany tao amin'ny CSKA. Nilaza ny mpanazatra an'i Slavia fa efa niteraka olana i Orlinov tamin'ny lasa. Mpanao gazety sady mpilatro ambony, ary olo-malaza any Bolgaria i Kristin Vacheva. Nampahafantarina an'i Orlin Orlinov tao amin'ny toeram-pandihizana iray tao Sofia izy. Ny alin'ny 20 Martsa, nentiny tany an-tranony i Orlinov. Ary nanomboka nidaroka azy izy.
[…] “Notaritiny tamin'ny gorodona aho. Feno rà avokoa ny rehetra […],” hoy i Vacheva tao amin'ny bTV.
Nahatonga fanehoan-kevitra maro tao amin'ny bilaogy sy tranokalam-baovao ao Bolgaria ity tranga ity.
Bilaogera crossagency nilaza zavatra avy tamin'ny tantara momba ny zava-nitranga [BG]:
[…] Ny maraina, tsy afaka niaina aho, hoy aho taminy: “Azafady, mila dokotera aho.” Hitako ny fanalahidy ary nandositra aho. Tamin'ny fotoana nidirako tao amin'ny fiara, nanomboka niantso ahy tamin'ny finday izy, nanoratra hafatra. Nolazainy fa raha tsy mandray ny findaiko aho dia ho ratsy kokoa izany. Hoy aho taminy: “Adala ianao” – ary hoy izy: “Eny, saingy tsy misy azonao atao.” […]
Bilaogera hafa, sisko871, nanoratra hoe [BG]:
[…] Nandositra ny mpampijaly azy i Katrin ny maraina. “Manapa-kevitra ny hitantara aho, satria mety hisy tovovavy hafa mety hanao fahadisoana tahaka izany ary darohany tahaka izany ihany koa.” Nanaiky i Orlinov fa tsy nanolana an'i Vacheva izy, fa “kely fotsiny.” Andrasana hanameloka an'ity mpilalao baolina kitran'ny CSKA ity ny biraon'ny mpampanoa lalàna noho ny herisetra sy daroka. […]
Novinkata nanoratra [BG] hoe:
[…] Nanambara i Orlin Orlinov, lohalaharana ao amin'ny CSKA fa tsy nidaroka ilay mpilatro sady mpanao gazetin'ny TV MSAT Katrin Vacheva, izay nitaraina momba ny fanolanana sy ny daroka misesisesy izy. […]
Bilaogy Boligara Goli dumi namoaka pikantsary misy ny resaka teo amin'ireo mpanohana ilay atleta [BG]:
Misara-kevitra ny fiarahamonina. Ny sasany mihevitra fa olana goavana izany ary ny hafa dia mieritreritra fa seraseram-bahoaka fotsiny izany. Tao anatin'ny andro vitsy lasa, niresaka momba ity tranga ity ny ankamaroan'ny fahitalavitra Boligara.